Return Path vs 250ok: အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်သောဆော့ဝဲလ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ Martech Zone
အဘယ်ကြောင့်အီးမေးလ်ပေးပို့အရေးကြီး? အရ 2015 အီးမေးလ်ဒေတာအရည်အသွေး Trends အစီရင်ခံစာ Experian ၏ပြောကြားချက်အရဈေးကွက် ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissuesနာများရှိသည် Return Path has အစီရင်ခံတင်ပြ တရားဝင်အီးမေးလ် ၂၀% ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပြdeliverနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြင်းသည်အခြေခံကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ, သို့ပြန်သွားသည် Path ကို အပြိုင်အဆိုင်များလွန်းလျှင်အီးမေးပို့နိုင်သည့်နေရာတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ၏ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူ 250okနှင့် Adobe ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်သည့်ဖောက်သည်များ၊ Marketoနှင့် Act-On, စက်မှုလုပ်ငန်းနောက်ဆုံးတော့တရားဝင်ရှိပါတယ် Path သို့ပြန်သွားရန်အခြားရွေးချယ်စရာ ပေးပို့ software နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုသည်။
Return Path နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ 250ok, အကြောင်းအရာသုံးခုတက်လာ - အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ အီးမေးလ်မျက်နှာပြင်ဒေတာနှင့် Professional ၀ န်ဆောင်မှုများ.
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Return Path's ပေါင်မုန့်နှင့်ထောပတ်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းဝယ်သူဟောင်းတစ် ဦး ၏အဆိုအရ ဒါကြောင့်ရွှေက၎င်း၏အလေးချိန်တန်ဖိုးရှိဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ယနေ့ Certification ၏အုတ်မြစ်သည်အီးမေးလ်စျေးကွက်များပေါ်တွင်အခြေခံပြီးပုံရသည်။ သူတို့၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်များကိုအကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်ညှိနှိုင်းနေသည်။ ကြောင်းကန ဦး စံတွေ့ဆုံပြီးနောက်ဖောက်သည်သူတို့အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးသူတို့အားမက်ထရစ်အတွင်းဆက်နေရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့မလုပ်ပါကသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရလဒ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မက်ထရစ်အတွင်း၌နေသောသူတို့ဖောက်သည်များအတွက်, သူတို့ကတိထားတော်နေကြသည် AOL၊ Yahoo၊ Microsoft၊ Comcast, Cox၊ Cloudmark, Yandex၊ Mail.ru၊ လိမ္မော်ရောင်၊ SpamAssassin နှင့် SpamCop သို့အီးမေးလ်ပေးပို့မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။.
ရင်းမြစ် - Oracle
သို့သော် Oracle မှ Global Deliverability Director သည် Kevin Senne က၎င်းတို့တွင်ကြော်ငြာထားသောအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးသူ (ISP) ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖောက်သည်များနမူနာရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လိုက်နာသောဖောက်သည်များအနေဖြင့် ISP မိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုမကြာခဏပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
Return Path အရ၊ ဂျီမေးလ်သည်များသောအားဖြင့်စာရင်းအများစု၏ထက်ဝက်ဖြစ်သည်၊ သူတို့က Certification ဖောက်သည်များသည်ဂျီမေးလ်တွင်လက်မှတ်မထိုးထားသည့်ပေးပို့သူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သူတို့ဖောက်သည်များလိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုဖော်ပြကြသည်။ ဤနေရာတွင်သတင်းကောင်းမှာမည်သူမဆိုသည်မည်သည့်ရောင်းချသူကိုမဆိုတစ်ပြားမှပေးစရာမလိုပဲအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ပရိုဂရမ်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဒီတော့, Certification ဖောက်သည်များအတွက်ကြီးမားသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ISP ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာဓာတ်လှေကားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ တာ ၀ န်ယူသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမှမည်မျှရရှိနိုင်ကြောင်းသူတို့၏အောင်မြင်မှုမည်မျှရရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်ရှိအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရဖောက်သည်များအတွက်ဘေးချင်းယှဉ်။ စစ်ဆေးခြင်းသည်သူတို့၏ရုတ်သိမ်းမှုသည်အကောင်းဆုံးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းမှရရှိခြင်းနှင့်လက်မှတ်၏ ISP မိတ်ဖက်များမှတဆင့်သူတို့ရရှိသောလစာအတွက်ကစားခြင်းဓာတ်သတ္တုမည်မျှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ စမ်းသပ်ရန်အချို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုအပ်သော်လည်းအချက်အလက်အခြေခံသောစျေးကွက်သမားများကတိုင်းတာခြင်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်ကိုသိကြသည်။
250ok အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပူဇော်ပါ သူတို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည် Return Path ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုလည်းအခြေခံသည်။ သို့သော် pay-to-play မော်ဒယ်အစား၊ ပေးပို့သူများအားသူတို့၏အစီအစဉ်ကိုထိရောက်စွာစီမံရန်နှင့်ခိုင်မာသည့်ပေးပို့သူဂုဏ်သတင်းကိုရရှိရန်အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
Path Email Panel ကိုပြန်ပို့ပါ
Return Path သည်အီးမေးလ် panel data များကို seedlists များနှင့်ပေါင်းပြီးအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာသည် 250ok seedlists နှင့်လက်ခံသူ - ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဒေတာကိုအသုံးပြုသည်။
panel data များနှင့်အလားအလာရှိသောပြissueနာတစ်ခုမှာ panelists မှ၎င်းတို့သတိပြုမိလျှင်ဖြစ်သည် ဒေတာကိုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ သူတို့ခွင့်ပြုခဲ့သလား မပါလျှင်, သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အဘို့အလုပ်မလုပ်သလဲ နောက်တဖန်, ငါပြန်လည် Path ရဲ့ panel ကို၏မူလအစမသိနှင့်အသုံးပြုသူများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူလျှင်, ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့် panel data များကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဒါပေမယ့် Return Path ရဲ့ panel data ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ, သူတို့က အစီရင်ခံစာ ထို ၄ င်းတို့၏ ၂၄% သာ ၄ င်းတို့ကိုအဓိကအီးမေးလ်အကောင့်အဖြစ်အသုံးပြုသည်.
မည်သည့်အမျိုးအစား panel ကိုမဆိုကိုင်တွယ်သည့်အခါ panel ကိုနောက်ဆုံးမွမ်းမံသောအခါရောင်းသူကိုမေးသင့်သည်။ Survivor ဘက်လိုက်မှုဆိုတာသင် panel ထဲကိုမ ၀ င်ချင်ဘူးဆိုတာပဲ။ နောက်တဖန် Return Path နှင့်စစ်ဆေးပါ။
Inbox နေရာချထားခြင်းအတွက်ပြtheနာမှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီမှစစ်ထုတ်ခြင်းကြောင့် panel data များသည် Outlook နှင့် Gmail တွင် ၁၀၀% သော Inbox နေရာချထားမှုကိုပြလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ပေးပို့သူများအနေဖြင့် inbox နေရာချထားခြင်းကွာဟမှုကိုအသုံးပြုသူအဆင့်စစ်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အမှန်တကယ်ပေးပို့နိုင်ခြင်းပြproblemနာရှိသလားဟုစဉ်းစားနိုင်သည်။
250ok သည်အီးမေးလ်ဘောင်ကွက်အချက်အလက်များကိုမသုံးပါ။ ၎င်းတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေဟာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့အသုံးပြုသူအဆင့်လှုပ်ရှားမှုဒေတာတွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ 250ok's Email Informant မှတဆင့်သင်ရရှိနိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဒေတာများအတွင်းရှိသည်။ analytics သင်၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ESP) မှထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဤကိရိယာများပေါင်းစပ်ထားခြင်းအားဖြင့်သင့်အားရရှိနိုင်သမျှသောအီးမေးလ်ထောက်လှမ်းရေးကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်။
Path သို့ပြန်သွားပါ 250ok Professional ကန်ဆောင်မှုများ
နှစ် ဦး စလုံးကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များထံမှရရှိနိုင်သောအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။ အဓိကခြားနားချက် - Return Path သည်အတွင်းပိုင်းအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် 250ok ပြင်ပပေးပို့အေဂျင်စီများနှင့်မိတ်ဖက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ပြန်သွားရန် Path ကိုစဉ်းစားနေတယ်လား၊ 250okသင်၏အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမည့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏မေးခွန်းများကိုမေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်တွင်းအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ သင်အတွေ့အကြုံနှစ်များ၊ လများစွာရှိသူတစ် ဦး ဦး လိုအပ်ပြီးပြန်လည်ကုစားရန်လိုအပ်လျှင်အဓိက ISP များနှင့်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အချာဖြစ်မည့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနှင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုတောင်းခံပါ။ script တစ်ခုမှဖတ်နေသည့်အငယ်တန်းအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နှင့်မှီဝဲခြင်းသည်သင်၏အစီအစဉ်အတွက်ကြီးမားသောပြtroubleနာဖြစ်နိုင်သည်။
၏လျင်မြန်စွာပြန်လည်သုံးသပ် 250ok ပလက်ဖောင်း
မှစ. 250ok မြင်ကွင်းပေါ်ရှိ platform အသစ်တစ်ခု၊ ငါသူတို့ module တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖော်ပြချင်တယ် - Reputation Informant, Inbox Informant, Email Informant, Design Informant နှင့် DMARC ။ module လေးခုစလုံးကိုအတူတကွအသုံးပြုစဉ်စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အစီအစဉ်များကိုစီမံရန်အတွက်ပေးပို့နိုင်သည့်ကိရိယာများအပြည့်စုံရှိသည်။
သတင်းထောက် - Reputation Informant တွင်သင်၏အီးမေးလ်၏ဂုဏ်သတင်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်
၏အကျော်ကြားဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမှာ 250ok အဖြေကသူတို့ပဲ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35 သန်း domains များ spam ထောင်ချောက်ကွန်ယက်ကို။ ဒီဒေတာကိုရယူသုံးစွဲခြင်းဟာအီးမေးလ်စျေးကွက်အတွက်မရည်ရွယ်ဘူး။ spam ထောင်ချောက်ကွန်ယက်၏အရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးနှင့်ထိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကို (ဥပမာ၊ တစ်နေ့တာမှထောင်ချောက်များ၊ အိုင်ပီ၊ ဒိုမိန်း၊ ဘာသာရပ်လိုင်း၊ နိုင်ငံ) ကိုအသေးစိတ်လက်လှမ်းမီမှုသည်ကျွန်ုပ်အားပေးပို့သူအဖြစ်အလွန်ဆွဲဆောင်သည်။ လူမည်းစာရင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလား။ ဤအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်စာရင်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်စိတ်ကြိုက်သတိပေးချက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ငါသတိပေးချက်ရသူနှင့်၎င်းသတိပေးချက်ကိုမည်သို့ပို့လွှတ်သည်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း (ဥပမာ - အီးမေးလ်၊ SMS) ကိုနှစ်သက်သည်။
DMARC ဒိုင်ခွက် ဂျီမေးလ်၏မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့် spam တိုးတက်မှုနှင့် phishing ကြိုးပမ်းမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မှာကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းဖြစ်သည် 250ok DMARC ဒိုင်ခွက်တစ်ခုကိုထည့်ရန်။ သင်သည်“ လေ့လာခြင်းမုဒ်” ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲသည်လိုက်နာမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှန်ကန်သောအရေးယူမှုကိုအကြံပြုလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးအားဖြင့်သင့်အားသီးသန့်ဖယ်ထားသည့်မူဝါဒသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်တွင်ခြိမ်းခြောက်မှုပုံဖော်ခြင်း၊
250ok သည်သင်၏ဗဟိုကိုတည်ဆောက်ရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည် တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်စောင့်ကြည့် (FBL) ။ သင်၏တုန့်ပြန်မှုမြန်ဆန်မှုသည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ISPs) အားသင်၏ဂုဏ်သတင်းအပေါ်တွင်မကျဆင်းစေရန်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သောကြောင့်စာရင်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး ကသင့်အားတိုင်ကြားသည့်အခါသိရန်အရေးကြီးသည်။
ဒါ့အပြင် 250ok ပေါင်းစည်းထားသည် Microsoft Smart Network Data Services (SNDS) နှင့် Signal Spam များ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစာကြေလွယ်တဲ့ UI ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကနေရှုပ်ထွေးပြီးမဖော်ရွေတဲ့အချက်အလက်အစုအဝေးတစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးအချို့ရောင်းချသူများက၎င်းအချက်အလက်များကိုသုံးစွဲခြင်း၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ 250ok အဲဒါကိုရိုးရှင်းအောင်သူတို့ရဲ့လမ်းထဲကထွက်သွားပြီ။
Inbox သတင်းပေး - စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အား inbox အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ရှုပ်ထွေးသော real-time tools များလိုအပ်သည်။ Inbox Informant ကသင်၏မေးလ်ဘယ်လောက်များများ inbox, spam နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာပြspecificနာများကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအားဖြင့်သင်ချိုးဖောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
ငါအကြားသတိပြုမိသော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမှာ 250ok နှင့် Return Path သည် 250ok ၏မျိုးစေ့စာရင်းဖြစ်သည်။ လွှမ်းခြုံမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုမီသင်အရေးမယူသောတစ်ခုတည်းသောမျိုးစေ့သည်သင်ပို့သောစာတိုက်ပုံးများ၌ဖြစ်သည်။ ကာလ။ 250ok အရေးကြီးသော host များ၌သင်လေဆာဖြင့်ကူညီရန် seedlist optimizer tool တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးတွင်သီးသန့်မျိုးစေ့များကိုင်ဆောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်မျိုးစေ့စာရင်းကောက်ယူမှုအနည်းငယ်ကွာခြားသော်လည်းအဓိကအိမ်ရှင်တိုင်းနီးပါးတွင်ယင်းသည်ပြparနာဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကမင်းလိုချင်တာတွေကိုရလိမ့်မယ်။
အီးမေးလ်သတင်းပေး - အချက်အလက်မောင်းနှင်သောကမ္ဘာတွင် CTR များမှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောပါ။ Email Informant ဖြင့် 250ok ၏ခြေရာခံခြင်းပစ်ဇယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်စာရင်းပေးသွင်းသူသည်မည်သည့်စာကိုဖတ်ပြီးမည်မျှကြာသည်၊ မည်သည့်စက်အမျိုးအစားနှင့် operating system ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုသည်ကိုဖော်ပြသည်။
မည်သည့်လင့်ခ်များသို့မဟုတ် CTAs များသည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ ပို့ချိန်ကိုသင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေသလား။ အီးမေးလ်သတင်းပေးသူကသင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးပြီးပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်သင်ဘာလုပ်သလဲ။
ဒီဇိုင်းသတင်းပေး - အီးမေးလ်စျေးကွက်သမားတိုင်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အကြိုအကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်သင့်သည် 250ok ဦး ဆောင် rendering ရောင်းချသူနှင့်အတူ Out-of-the-box ကိုပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ် Acid ပေါ်တွင်အီးမေးလ် နှင့် အချစ်.
Design Informant သည်သင်၏ဖန်တီးမှုကို Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook နှင့်များစွာသောအခြား spam filter များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမစတင်မီ spam အစပျိုးမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
ငါထင်သည်အလွန်ဆင်တူပေမယ့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောရောင်းချသူအီးမေးလ်ပို့လွှတ်အာကာသအတွင်းရှိခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအရာဖြစ်၏။ သငျသညျ DMARC tools များ, ဒါမှမဟုတ်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ပေးပို့ software ကိုများအတွက်စျေးဝယ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုပြန်သွားပါ Path ကိုဆက်သွယ်ပါ 250ok သရုပ်ပြတစ်ခုအတွက်နဲ့မင်းအတွက်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီး၊ သင်သည် Return Path သို့ပြန်သွားလျှင်ဖြစ်စေ၊ 250ok ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေပါ။
ထုတ်ဖော်: Oracle သည် Oracle ကော်ပိုရေးရှင်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် / သို့မဟုတ် ၄ င်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ Return Path သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 250ok 250OK LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ 250ok ငါတို့ site ကိုစပွန်ဆာပေးတယ်။ ငါတည်ထောင်သူ Greg Kraios ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။
Tags: android ဖုန်းအန်းဒရွိုက် 2.3Android 2.3 Email PreviewAndroid 2.3 အီးမေးလ်အစမ်းကြည့်ခြင်းအန်းဒရွိုက် 4.2Android 4.2 Email PreviewAndroid 4.2 အီးမေးလ်အစမ်းကြည့်ခြင်းAndroid အီးမေးလ်အကြို previewAndroid အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုAOL မေးလ်AOL မေးလ် ChromeAOL မေးလ် Chrome အီးမေးလ်အကြို PreviewAOL မေးလ် Chrome အီးမေးလ်အကြိုစမ်းသပ်မှုAOL မေးလ်အီးမေးလ်အစမ်းကြိုAOL မေးလ်အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုAOL မေးလ် Internet Explorer ကိုAOL မေးလ် Internet Explorer ကိုအီးမေးလ်ကိုအစမ်းကြည့်ပါAOL မေးလ် Internet Explorer ကိုအီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုApple Mail ၆Apple Mail6အီးမေးလ်အကြို previewApple Mail6အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုBlackBerry4OSBlackBerry4OS အီးမေးလ်အကြို previewBlackBerry4OS အီးမေးလ်အတွက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုBlackBerry5OSBlackBerry5OS အီးမေးလ်အကြို previewBlackBerry5OS အီးမေးလ်အတွက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းအရောင်ကန်းခြင်းအရောင်ကန်းသောအီးမေးလ် preview ကိုအရောင် Blindness အီးမေးလ်ကိုအကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုပို့ဆောင်ရေးDMARCအီးမေးလ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအီးမေးပို့နိုင်မှုအီးမေးလ်ဒီဇိုင်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းအီးမေးလ်အီးမေးလ် panel ကိုဒေတာအီးမေးလ်ဂုဏ်သတင်းGmail ကိုဂျီမေးလ် Appဂျီမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းအီးမေးလ်အကြိုပြသမှုဂျီမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းအီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုဂျီမေးလ် Chromeဂျီမေးလ်ခရုမ်းအီးမေးလ်အကြို previewဂျီမေးလ် Chrome အီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုGmail Firefoxဂျီမေးလ် Firefox အီးမေးလ်အကြို previewဂျီမေးလ် Firefox အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုGmail Internet Explorerဂျီမေးလ် Internet Explorer အီးမေးလ်အကြိုပြသမှုဂျီမေးလ် Internet Explorer အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုgreg kraiosinbox ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာInbox သတင်းပေးInbox နေရာချထားမှုipadiPad အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPad အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPad miniiPad Mini အီးမေးလ်အကြို previewiPad Mini အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုအိုင်ပက် RetinaiPad Retina အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းiPad Retina အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPhone ကို 4siPhone 4s အီးမေးလ်အကြို previewiPhone 4s အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPhone ကို 5iPhone5အီးမေးလ်အကြို previewiPhone5အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPhone ကို 5siPhone 5s အီးမေးလ်အကြို previewiPhone 5s အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPhone ကို 6iPhone6အီးမေးလ်အကြို previewiPhone6အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုiPhone ကို6Plus အားiPhone6Plus အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းiPhone6Plus အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုisp ပေးပို့ခြင်းisp အီးမေးလ်စမ်းသပ်ခြင်းlitmusLotus မှတ်စုများ 6.5Lotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းLotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုLotus မှတ်စုများ 7Lotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းLotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုLotus မှတ်စုများ 8Lotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းLotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုLotus မှတ်စုများ 8.5Lotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းLotus မှတ်စု ၆.၅ အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုMAC OS XMAC OS X အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုMAC OS X အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုမိုက်ကရိုဆော့ဖ် WINDOWSMICROSOFT WINDOWS အီးမေးလ် preview ကိုMICROSOFT WINDOWS အီးမေးလ် preview စမ်းသပ်မှုOutlook နဲ့ 2000Outlook 2000 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2000 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2002Outlook 2002 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2002 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2003Outlook 2003 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2003 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2007Outlook 2007 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2007 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2010Outlook 2010 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2010 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2011Outlook 2011 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2011 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook နဲ့ 2013Outlook 2013 အီးမေးလ်အကြို previewOutlook 2013 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook.com (Firefox)Outlook.com (Firefox) အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းOutlook.com (Firefox) အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးချက်Outlook.com Chrome ကိုOutlook.com Chrome ကိုအီးမေးလ်အကြို previewOutlook.com Chrome အီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုOutlook.com အင်တာနက် ExplorerOutlook.com Internet Explorer အီးမေးလ်အကြိုမြင်ကွင်းOutlook.com Internet Explorer အီးမေးလ်အကြိုစစ်ဆေးမှုစာမေးပွဲရိုးရိုးစာသားရိုးရိုးစာသားအီးမေးလ်ကို preview ကိုရိုးရိုးစာသားကိုအီးမေးလ်ကို preview ကိုစမ်းသပ်သတင်းထောက်ပြန်လာလမ်းကြောင်းအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားပါပြန်လာလမ်းကြောင်းလက်မှတ်spam ထောင်ချောက်spam ထောင်ချောက်ကွန်ယက်ကိုspam များကိုအစပျိုးပေးသည်Thunderbird နောက်ဆုံးပေါ် WEB-basedThunderbird ၏နောက်ဆုံးဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းThunderbird နောက်ဆုံးပေါ် WEB-based အီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုက Windows Phone 8Windows Phone 8 အီးမေးလ် previewWindows Phone 8 အီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုYahoo! မေးလ် ChromeYahoo! မေးလ် Chrome ကိုအီးမေးလ်ကိုအစမ်းကြည့်ပါYahoo! မေးလ် Chrome ကိုအီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုYahoo! Firefox မေးလ်Yahoo! မေးလ် Firefox အီးမေးလ်ကို preview ကိုYahoo! မေးလ် Firefox အီးမေးလ်ကို preview ကိုစမ်းသပ်Yahoo! Internet Explorer ကိုစာပို့ပါYahoo! မေးလ် Internet Explorer ကိုအီးမေးလ်ကိုအစမ်းကြည့်ပါYahoo! စာပို့ Internet Explorer အီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု
Google RankBrain ဆိုတာဘာလဲ။
7:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 35
တစ် ဦး ကအလေးအနက်ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်
16:2016 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 47
ကောင်းပြီ၊ ဒီ post ရဲ့တရားဝင်မှုကိုသတ်ပစ်လိုက်တာက“ 250ok ဟာငါတို့ site ရဲ့ sponsors တွေဖြစ်ပြီးငါတည်ထောင်သူ Greg Kraios ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်း”
သြဂုတ် 17, 2016 မှာ 10: 02 AM
ဟုတ်ပါတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကဒီရူပါရုံကိုခံစားခဲ့ရပြီးအခုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များစွာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ Greg နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပါတယ်။ သူ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းတွင်စကားလုံးပျံ့နှံ့အောင်ကူညီပေးရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ထိုအခါငါဒီ site ကိုထောကျပံ့များနှင့်ငါ့ကိုစာဖတ်သူများမှသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပေးကူညီသောငါတို့စပွန်ဆာများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးချီးကျူးသင့်သည်။ အမည်မဖော်လိုသောမှတ်ချက်ပေးသူတစ် ဦး ၏လှည့်စားမှုကိုမခံဘဲစစ်မှန်သောနာမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာအစစ်အမှန်ကိုဖော်ပြရန်အလွန်ကြောက်သည်။
သြဂုတ် 17, 2016 မှာ 11: 11 AM
Return Path မိတ်ဖက်များမှပိတ်ဆို့ခြင်းကိုမြင်နေရသည့်အခြား Cert ဖောက်သည်များ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သတိရပါ၊ ကောင်းသောအပြုအမူသည်အရေးမယူပါ။ 😉
သြဂုတ် 17, 2016 မှာ 11: 45 AM
ဒေါက်ဂလပ်, ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်; ပေးပို့နိုင်မည့်မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင်သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းသိရန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စိုးရိမ်မှုရှိသော်လည်းသင်သည်သင်၏ထုတ်ဖော်မှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၅၀ ကွတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုရှိသောကြောင့်သင်၏နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်အမှန်တကယ်ဘက်မလိုက်သောအနေအထားကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သင်၏ပြန်ကြားရေးလမ်းကြောင်းကိုသင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွင်းမေးခွန်းများစွာကိုလည်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိပြီးထိုကွာဟချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်အကူအညီတောင်းခြင်းမပြုခဲ့သည့်အတွက်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ် Optimization ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးချင်ပါတယ်။
သင်၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူကွန်ယက်အဖွဲ့ ၀ င်များသည်သူတို့၏စာတိုက်ပုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအချက်အလက်များကိုရယူရန် Return Path ကိုအမှန်တကယ်သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သငျသညျချင်လျှင်ဒီအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များပေးရတာဝမ်းသာပါတယ်။
Return Path တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းမှုစွမ်းအားများရရှိထားသည့်ထူးခြားသောအချက်အလက်နှင့်ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပေးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက်အလွန်အမင်းဂုဏ်ယူသည်။ ဒေတာကိုအခြေခံသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏အောင်မြင်မှုကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုငါတို့သိသည်။ စျေးကွက်သမားများသည်၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်စာရင်းသွင်းထားသူများထံမှအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အရေးကြီးသည်။ မိမိတို့၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်ကိုအမှန်တကယ်ကြီးထွားစေလိုပြီးအီးမေးလ်မှတိုးတက်သော ROI ကိုမြင်တွေ့လိုသောအီးမေးလ်စျေးကွက်က Return Path နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမှအကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒေတာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများနှင့်စျေးကွက်သမားများသည်အီးမေးလ်မှ ၀ င်ငွေတိုးပွားစေခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာရင်းပေးသွင်းသူများ၏ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အချက်အလက်၊
သြဂုတ် 17, 2016 မှာ 11: 52 AM
ထွက်ရောက်ရှိဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Return Path သည်ကျယ်ပြန့်သည့်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်းနှင့်လမ်းကြောင်းကိုပို့ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ငန်း၌သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ အဖြစ်ကောင်းစွာဒေတာ access ကိုပြissueနာကိုရှင်းလင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုကအမြဲကောင်းတယ်၊ 250ok ရဲ့ toolset ကိုငါတို့ကိုယ်ပိုင် ESP အတွက်သုံးပြီးရင်ရလဒ်တွေကိုလုံးဝသဘောကျသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ၊ သူတို့ကစပွန်ဆာဖြစ်နေတုန်း၊ ငါတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုသုံးစွဲသူနဲ့သုံးစွဲသူလည်းပါ။ ၎င်းပလက်ဖောင်း၏တုန့်ပြန်မှုသည်လုံးဝဘက်လိုက်မှုမဟုတ်ပါ - ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အသုံးမပြုခဲ့သောပလက်ဖောင်းအတွက်မည်သည့်အခါမျှထောက်ခံချက်ပေးမည်မဟုတ်။
5:2016 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 02 တွင်
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ delivrability ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် RP Orange သည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုသင်အကြံပြုသည်ကိုအံ့သြမိသည်။ လိမ္မော်ရောင် RP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုမသုံးပါ။
ဒီဇင်ဘာ 6, 2016 မှာ 4: 21 AM
18:2017 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 05 တွင်
ငါသည်လည်းစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်အကြောင်းကိုစပ်စုမိပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် 250ok ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံး 250ok နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှုကိုမသိဘဲ demo ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်တွန့်ဆုတ်နေသည်။